ဈေးဝယ်ပြီး အိမ်ပြန်ရောက်ရင် အင်္ကျီ၊ ဖိနပ်၊ ဆံပင်၊ သတင်းစာတွေမှာ ကိုဗစ်ပိုး ကပ်ပါလာနိုင်သလား? – Shwe Sar
ဒီကိစ္စကို ရောဂါပိုးကျွမ်းကျင်သူတွေဖြေထားတာရှိပါတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်ရင်လေ အင်္ကျီလဲပြီး ခေါင်းကနေလောင်းပြီး ရေချိုးပစ်ရမှာလား? အပြင်ထွက်ရင် ဈေးထဲမှာ Social Distancing လု ပ်ပြီး ခပ်ခွာခွာဈေးဝယ်ကြပါသလား?ဥပမာ – City Mart မှာ ဈေးဝယ်တယ်၊ ခပ်ခွာခွာရပ်တယ်။ လူတွေနဲ့ ထိတွေ့မှုနည်းတယ်။ ဒါဆိုရင် အင်္ကျီကို ချိတ်နဲ့ချိတ်ပြီး ပြန်လှမ်းထားလို့ ရတ ယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တချို့ဈေးတွေမှာ ဆိုင်တွေကို ခွာထားတယ်။ လူတွေကို ခပ်ဝေးဝေးက တန်းစီခိုင်းတယ်။ ပစ္စည်းပေးရင်တောင် ဝါးလုံးနဲ့။ အဲ့လိုတကယ်လုပ်နိုင်ရင်ကောင်းပါတယ်။ ရန်ကုန်က ၇ လမ်းထိပ်တို့၊ ၁၈ လမ်းထိပ်တို့မှာတော့ လူတွေဆိုတာ တယောက်နဲ့တယောက် ပူးကပ်နေမြဲပါပဲ။ တိုးကြိတ်ဈေးဝယ်နေကြတာပါပဲ။ ဒါမျိုးဆို အိမ်ရောက်တာနဲ့ အဝတ်ကိုတန်းပြီးလျှော်မယ့်အထဲ ထည့်တာေ ကာင်းပါတယ်။
Social distancing ရှိတာနဲ့ အင်္ကျီပေါ်နဲ့ဆံပင်ပေါ်ကပ်နိုင်ခြေဘာလို့နည်းတာလဲ?
လေ့လာချက်တစ်ချို့အရ ချောင်းဆိုး၊ နှာချေပြီးရင် ဗိုင်းရပ်စ် ပါတဲ့အမှုန် အများစုဟာေ လထဲမှာမနေပဲ မြေကြီးပေါ်ကျ သွားပါတယ်။ သေးတဲ့အမှုန်ဟာ လေထဲမှာနာရီဝက်အထိရှိနေနိုင်တာကို တွေ့ ရှိရ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Aerodynamics ရူပဗေဒ သဘောတရားကို သင်ဖူးရင် ဒီအမှုန်တွေဟာ အင်္ကျီ၊ ဆံပင်ပေါ်ကပ်လို့မလွယ်တာကို နားလည်ပါလိမ့်မယ်။
ပြတင်းပေါက်ကနေထိုးနေချိန်မှာ နေရောင်ထဲမှာ အမှုန်တွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ လက်နဲ့လိုက်ဖမ်းကြည့်ပါ။ လွင့်ပြေးသွားပါတယ်။ လေထဲမှာဝဲနေတဲ့ မှို့စကလေးကို လိုက်ဖမ်းကြည့်ပါ။ ပြေး သွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ရေထဲမှာရှိတဲ့အနည်ကို လက်နဲ့ထိဖို့ကြိုးစားရင် မလွယ်တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ကြားခံရေထုကြောင့် လိုက်လေပြေးလေဖြစ်တာပါ။ လေထဲမှာရှိတဲ့လေထုဟာ ကျနော် တို့ ကိုအမှုန်တွေနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူမထိမိအောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ကျနော်တို့က ငြိမ်နေရင်လည်း ဖုန်တက်မြန်တယ်။ အရမ်းမြန်ရင်လည်း ဖုန်တက်မြန်ပါတယ်။ (ပန်ကာ ဒလက် ကြို ကည့်ပါ။)ဒါ့ကြောင့် ကျနော်တို့ဟာ Social Distancing လို့ခေါ်တဲ့ ခပ်ခွာခွာဆက်ဆံခြင်းမူကို လက်ကိုင်ထားရင် လေထဲမှာရှိနေတဲ့အမှုန်ကို ကြောက်စရာမလိုပါ။ ဒါပေမယ့် လူေ တြွ ကား ထဲကျပ်ညပ်ဈေးဝယ်ရရင် ဆံပင်နဲ့အင်္ကျီပေါ် ပိုးပါတဲ့အမှုန်တွေ ဒါရိုက်ကျနိုင်တာမို့ အင်္ကျီကို လျှော်သင့်တယ်လို့ အကြံပြုတာပါ။
ဆံပင်ပေါ်အနောက်ကနေ တယောက်ယောက်ချောင်းဆိုးလိုက်တယ်ဆိုပါစို့။ အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ ခေါင်းအုံးနဲ့ ဆိုဖာပေါ် ပေါ်လှဲမချပါနဲ့။ အထူးသဖြင့်ခေါင်းအုံးပါ။ တယောက်ယောက်က ဆံပ င်ပေါ် တိုက်ရိုက်ချောင်းဆိုးခဲ့ရင်တောင်မှ အများစုကလေထဲလွှင့်သွားပါမယ်။ တကယ်ကူးစေတာက လက်ဆီကပါ။
Washionton University School of Medicine က Dr. Andrew Janowski ရဲ့အပြောအရ ပိုးပမာဏ X ကို ဆံပင်ပေါ် ရောက်စေခဲ့ရင် သင့်လက်နဲ့ပြန်ထိမိမှာက X ထက်အများကြီးနည်းတဲ့ပမာဏပါ။ အဲ့ဒီကနေ သင့်နှာခေါင်း၊ ပါးစပ်ဆီပြန်ရောက်မှာက အလွန့်အလွန်နည်းတဲ့ပမဏပါ။ ဒီရက်ထဲ သမီးရည်းစားချိန်းတွေ့ရင် ဆံပင်နမ်းတာတော့ သည်း ခံကြပေါ့။
နောက်တစ်ချက်က ပိုးဟာကိုယ်ခန္ဓာအပေါ်ပိုင်းကို လေနဲ့ဆန်မတက်ပဲ ကိုယ်ခန္ဓာ အောက်ပိုင်းဘက်ကို ပိုရောက်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ဆံပင်ကို သိပ်စိတ်ပူစရာမရှိပါ။ ကိုဗစ်ကာလမှာ ဆံပင်တိုတို ထားကြပေါ့။ဒါ့ကြောင့်ဈေးကပြန်လာရင် အဓိကကလက်ကို အသေအချာဆေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဝတ်ကိုခါပစ်တာဟာ လေထဲကိုပိုးတွေလွင့်ပြီး သင်ပြန်ရှုမိတတ်ပါတယ်။ Hair dryer နဲ့မှုတ် တာလည်း အဲ့ဒီအပူလောက်နဲ့ ပိုးမသေပါ။ အမှုန်တွေကို သင်ရှုမိတတ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာ သိထားစရာတစ်ခုက ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရဲ့သက်တမ်းတစ်ဝက်သေနှုန်း Half Life က မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ လေ ထဲ မှာပိုမြန်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက အဝတ်ရဲ့အသား Fabric က ရေဓာတ်ကိုစုပ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် သူ့အပေါ်ကိုကျထားတဲ့ ပိုးကိုသေတာမြန်စေပါတယ်။
လူဆီကပိုးကမြေကြီးပေါ်ကျတယ်။ အဲ့ဒီပိုးကို ဖိနပ်က သယ်ဆောင်လာပါတယ်။ တရုတ်မှာ ICU ထဲစီးခဲ့တဲ့ ဖိနပ်တစ်ဝက်မှာ ပိုးသယ်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ေ ဈးကြ ပန်လာရင် ဖိနပ်ကို လက်နဲ့မကိုင်ပါနဲ့။ အိမ်ထဲမစီးမိပါစေနဲ့။ ကလေးတွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။ဖိနပ်ကို Wet Tissue နဲ့ မသုတ်ပါနဲ့၊ Wet Tissue လည်းနှမျောစရာကောင်းတဲ့အပြင် လက်ပေါ် လည်း ကူးစေနိုင်ပါတယ်။
အခုထိသတင်းစာ၊ စာရွက်ဖတ်လို့ ပိုးကူးတဲ့ Case မကြားမိသေးပါဘူး။ New England Journal ရဲ့လေ့လာချက်အရ စာစောင်တွေကို မဖတ်ခင် 24 နာရီထားပြီးမှ ဖတ်ပါတဲ့။ စက္ကူပေါ်မှာ 24 နာရီပဲအသက်ရှင်တယ်ဆိုပါတယ်။ စက္ကူကလည်းရေဓာတ်ကို စုပ်ယူတာမို့ ပိုးကိုသေစေပါတယ်။
ဒီကိစ်စကို ရောဂါပိုးကြှမျးကငျြသူတှဖွေထေားတာရှိပါတယျ။အိမျပွနျရောကျရငျလေ အင်ျကြီလဲပွီး ခေါငျးကနလေောငျးပွီး ရခြေိုးပဈရမှာလား? အပွငျထှကျရငျ ဈေးထဲမှာ Social Distancing လု ပျပွီး ခပျခှာခှာဈေးဝယျကွပါသလား?ဥပမာ – City Mart မှာ ဈေးဝယျတယျ၊ ခပျခှာခှာရပျတယျ။ လူတှနေဲ့ ထိတှမှေု့နညျးတယျ။ ဒါဆိုရငျ အင်ျကြီကို ခြိတျနဲ့ခြိတျပွီး ပွနျလှမျးထားလို့ ရတ ယျလို့ ဆိုပါတယျ။
တခြို့ဈေးတှမှော ဆိုငျတှကေို ခှာထားတယျ။ လူတှကေို ခပျဝေးဝေးက တနျးစီခိုငျးတယျ။ ပစ်စညျးပေးရငျတောငျ ဝါးလုံးနဲ့။ အဲ့လိုတကယျလုပျနိုငျရငျကောငျးပါတယျ။ ရနျကုနျက ၇ လမျးထိပျတို့၊ ၁၈ လမျးထိပျတို့မှာတော့ လူတှဆေိုတာ တယောကျနဲ့တယောကျ ပူးကပျနမွေဲပါပဲ။ တိုးကွိတျဈေးဝယျနကွေတာပါပဲ။ ဒါမြိုးဆို အိမျရောကျတာနဲ့ အဝတျကိုတနျးပွီးလြှျောမယျ့အထဲ ထညျ့တာေ ကာငျးပါတယျ။
လလေ့ာခကျြတဈခြို့အရ ခြောငျးဆိုး၊ နှာခပြွေီးရငျ ဗိုငျးရပျဈ ပါတဲ့အမှုနျ အမြားစုဟာေ လထဲမှာမနပေဲ မွကွေီးပျေါကြ သှားပါတယျ။ သေးတဲ့အမှုနျဟာ လထေဲမှာနာရီဝကျအထိရှိနနေိုငျတာကို တှေ့ ရှိရ ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Aerodynamics ရူပဗဒေ သဘောတရားကို သငျဖူးရငျ ဒီအမှုနျတှဟော အင်ျကြီ၊ ဆံပငျပျေါကပျလို့မလှယျတာကို နားလညျပါလိမျ့မယျ။
ပွတငျးပေါကျကနထေိုးနခြေိနျမှာ နရေောငျထဲမှာ အမှုနျတှတှေရေ့ပါလိမျ့မယျ။ လကျနဲ့လိုကျဖမျးကွညျ့ပါ။ လှငျ့ပွေးသှားပါတယျ။ လထေဲမှာဝဲနတေဲ့ မှို့စကလေးကို လိုကျဖမျးကွညျ့ပါ။ ပွေး သှားတာတှရေ့ပါလိမျ့မယျ။ ရထေဲမှာရှိတဲ့အနညျကို လကျနဲ့ထိဖို့ကွိုးစားရငျ မလှယျတာတှရေ့ပါလိမျ့မယျ။ ကွားခံရထေုကွောငျ့ လိုကျလပွေေးလဖွေဈတာပါ။ လထေဲမှာရှိတဲ့လထေုဟာ ကနြျော တို့ကိုအမှုနျတှနေဲ့ လှယျလှယျကူကူမထိမိအောငျ ကာကှယျပေးပါတယျ။ကနြျောတို့က ငွိမျနရေငျလညျး ဖုနျတကျမွနျတယျ။ အရမျးမွနျရငျလညျး ဖုနျတကျမွနျပါတယျ။ (ပနျကာ ဒလကျ ကွို ကညျ့ပါ။)ဒါ့ကွောငျ့ ကနြျောတို့ဟာ Social Distancing လို့ချေါတဲ့ ခပျခှာခှာဆကျဆံခွငျးမူကို လကျကိုငျထားရငျ လထေဲမှာရှိနတေဲ့အမှုနျကို ကွောကျစရာမလိုပါ။ ဒါပမေယျ့ လူေ တွှ ကား ထဲကပျြညပျဈေးဝယျရရငျ ဆံပငျနဲ့အင်ျကြီပျေါ ပိုးပါတဲ့အမှုနျတှေ ဒါရိုကျကနြိုငျတာမို့ အင်ျကြီကို လြှျောသငျ့တယျလို့ အကွံပွုတာပါ။
ဆံပငျပျေါအနောကျကနေ တယောကျယောကျခြောငျးဆိုးလိုကျတယျဆိုပါစို့။ အိမျပွနျရောကျတာနဲ့ ခေါငျးအုံးနဲ့ ဆိုဖာပျေါ ပျေါလှဲမခပြါနဲ့။ အထူးသဖွငျ့ခေါငျးအုံးပါ။ တယောကျယောကျက ဆံပ ငျပျေါ တိုကျရိုကျခြောငျးဆိုးခဲ့ရငျတောငျမှ အမြားစုကလထေဲလှငျ့သှားပါမယျ။ တကယျကူးစတောက လကျဆီကပါ။
Washionton University School of Medicine က Dr. Andrew Janowski ရဲ့အပွောအရ ပိုးပမာဏ X ကို ဆံပငျပျေါ ရောကျစခေဲ့ရငျ သငျ့လကျနဲ့ပွနျထိမိမှာက X ထကျအမြားကွီးနညျးတဲ့ပမာဏပါ။ အဲ့ဒီကနေ သငျ့နှာခေါငျး၊ ပါးစပျဆီပွနျရောကျမှာက အလှနျ့အလှနျနညျးတဲ့ပမဏပါ။ ဒီရကျထဲ သမီးရညျးစားခြိနျးတှရေ့ငျ ဆံပငျနမျးတာတော့ သညျး ခံကွပေါ့။
နောကျတဈခကျြက ပိုးဟာကိုယျခန်ဓာအပျေါပိုငျးကို လနေဲ့ဆနျမတကျပဲ ကိုယျခန်ဓာ အောကျပိုငျးဘကျကို ပိုရောကျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ဆံပငျကို သိပျစိတျပူစရာမရှိပါ။ ကိုဗဈကာလမှာ ဆံပငျတိုတို ထားကွပေါ့။ဒါ့ကွောငျ့ဈေးကပွနျလာရငျ အဓိကကလကျကို အသအေခြာဆေးဖို့ ဖွဈပါတယျ။ အဝတျကိုခါပဈတာဟာ လထေဲကိုပိုးတှလှေငျ့ပွီး သငျပွနျရှုမိတတျပါတယျ။ Hair dryer နဲ့မှုတျ တာလညျး အဲ့ဒီအပူလောကျနဲ့ ပိုးမသပေါ။ အမှုနျတှကေို သငျရှုမိတတျပါတယျ။ဒီနရောမှာ သိထားစရာတဈခုက ဗိုငျးရပျဈပိုးရဲ့သကျတမျးတဈဝကျသနှေုနျး Half Life က မကျြနှာပွငျပျေါမှာ လေ ထဲ မှာပိုမွနျပါတယျ။ နောကျတဈခုက အဝတျရဲ့အသား Fabric က ရဓောတျကိုစုပျပါတယျ။ အဲ့ဒါကွောငျ့ သူ့အပျေါကိုကထြားတဲ့ ပိုးကိုသတောမွနျစပေါတယျ။
လူဆီကပိုးကမွကွေီးပျေါကတြယျ။ အဲ့ဒီပိုးကို ဖိနပျက သယျဆောငျလာပါတယျ။ တရုတျမှာ ICU ထဲစီးခဲ့တဲ့ ဖိနပျတဈဝကျမှာ ပိုးသယျလာတာတှရေ့ပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ေ ဈးကွ ပနျလာရငျ ဖိနပျကို လကျနဲ့မကိုငျပါနဲ့။ အိမျထဲမစီးမိပါစနေဲ့။ ကလေးတှနေဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။ဖိနပျကို Wet Tissue နဲ့ မသုတျပါနဲ့၊ Wet Tissue လညျးနှမြောစရာကောငျးတဲ့အပွငျ လကျပျေါ လညျး ကူးစနေိုငျပါတယျ။
Previous post မမဆောင်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ MTVသီချင်းလေးကို ဝေဖန်နေကြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောပြလာတဲ့ ကျော်ကျော်နန်
Next post အာသီးရောင်လည်ချောင်းနာ သူများ အတွက် နာရီ ပိုင်း အတွင်း ပျောက်အောင် လုပ်မယ်